बालबालिकाको मुटु बिग्रिने कारण घाँटीको दुखाइ – Health Post Nepal
बालबालिकाको मुटु बिग्रिने कारण घाँटीको दुखाइ
२०७८ कार्तिक ३ गते १२:०२
स्कूल जाने उमेरका बालबालिकामा दोहोरिरहने ज्वरो र घाँटीको दुखाइलाई मौसमी समस्या सम्झिएर लापरवाही गर्ने गर्नुभएको छ? यदि यसो हो भने त्यही लापरवाही जिन्दगीभर पछुताउने कारण पनि बन्न सक्छ। बारम्बार दोहोरिने टन्सिलाइटिस वा फ्यारिन्जाइटिसका मामुली घाँटीका दुखाइले बाथ ज्वरो र बाथ मुटुको रोग निम्त्याउँछन्। घाँटीको सामान्य इन्फेक्सनबाट सुरु हुने बाथ ज्वरोबाट बाथ मुटुरोग भएर जीवनभर उपचार गरिरहनुपर्ने वा मृत्युकै कारण बन्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्।
विशेषगरी ३ देखि १५ वर्षको उमेरसम्म बारम्बार घाँटी दुखेमा घाँटी दुखेको १ देखि चार हप्तापछि एक किसिमको ज्वरो आउँन सक्छ। यसरी ज्वरो आउँदा हात खुट्टा र जोर्नीहरु दुख्ने र सुन्निने हुन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यस्तो ज्वरोलाई बाथ ज्वरो भनिन्छ। बाथ ज्वरो आएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी केटाकेटीमा पछि गएर मुटुका भल्भ खराब हुने रोग लाग्नसक्ने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन्।
‘बि हेमोलेइटिक स्टेप्टोकोकस ए’ नामक किटाणुको संक्रमण भएपछिसुरुमा घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउने हुन्छ। त्यसपछि ५ देखि ७ दिनमा घाँटी ठीक हुन्छ। तर यसको १ देखि ४ हप्तापछि फेरि ज्वरो फर्किने हुन्छ। तर ज्वरो फर्किएर आउँदा जोर्नी दुख्ने समस्या पनि थपिएर आउँछ।
जोर्नी पनि दुख्ने, सुन्निने समस्यालाई बाथ ज्वरो भनिन्छ। चिसो र हावा नचल्ने कक्षाकोठा एवं बासस्थानमा बस्ने बालबालिकालाई बारम्बार घाँटीको संक्रमणको खतरा हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार यस्तो भाइरसको संक्रमण भएको तीन प्रतिशतमा बाथ ज्वरो र बाथ ज्वरो भएकामध्ये ५० प्रतिशत बालबालिकामा मुटुको भल्भ खराब हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक लाख बालबालिकामध्ये सय जना यस रोगबाट पीडित छन्। दश प्रतिशत मृत्युको कारण पनि यही समस्या हो। नेपालमा एक लाख बालबालिकामा प्रति वर्ष ३ सय देखि ५ सय जनासम्म यस रोगबाट पीडित हुने गरेका छन्। युवा र वयस्कको समेत तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, अत्यन्त्रै ठूलो समस्या छ । चिकित्सकहरुका अनुसार बाथ मुटुका कारण क्षतिग्रस्त मुटु लिएर कष्टप्रद जीवनयापन गरिरहेकाहरुको संख्या त्योभन्दा निकै ठूलो छ।
कसरी चिन्ने बाथ ज्वरो ?
बाथ ज्वरो हुँदा सुरुमा घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउँने हुन्छ। यस्तो समस्या ५ देखि ६ दिनभित्र आफैं ठीक हुन्छ। पुनः एकदेखि चार हप्ताभित्र ज्वरो बल्झिएर आउँछ। ज्वरो जति धेरै पटक बल्झिँदै जान्छ, स्थान परिवर्तन गर्दै घुँडा, कुर्कुच्चा, कुहिना र नाडीजस्ता जोर्नी पनि सुन्निने र दुख्ने हुन्छ। यसको असर मुटुमा पर्छ। यसको आक्रमण बढ्दै जाँदा मुटुका भल्भ सुन्निने, खुकुलो वा साँघुरो हुने, मुटु नै सुन्निने र यसको फलस्वरुप मुटु हल्लिने, दम बढ्नेजस्ता समस्या थपिन्छ। कसैकसैलाई कुहिना, घुँडा, नलीखुट्टाजस्ता ठाउँमा छालामुनि सानासाना केराउका दानाजस्ता डल्ला देखापर्छन्। यस्ता डल्ला अल्पकालीन र बढीका एक वर्षसम्म पनि रहने हुन्छ। कसैलाई पेट वा ढाडमा नचिलाउने तर बीचमा सेतो र वरिपरी राता चक्काहरु भएको डाबर पनि देखिन सक्छ।
उपचार र रोकथाम
डा.रेग्मीका अनुसार बालबालिकामा घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने समस्या भएमा यसको समयमै उपचारगरी बाथ ज्वरो उत्पन्न हुने संभावनालाई रोक्नु नै बचावटको प्रमुख उपचार हो। त्यसबाहेक बालबालिकालाई घाँटीको इन्फेक्सन ठीक पार्न सकेमा बाथ ज्वरो उत्पन्न हुने संभावना कम हुन्छ। घाँटीको इन्फेक्सनको समयमै उपचार गरेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम घटाउन सकिन्छ। घाँटीको दुखाइमा कारण पत्ता लगाएर पेन्सिलिन सुई वा एन्टिवायोटिक्सको सेवन गरेमा रोगबाट बच्न सकिन्छ।
चिकित्सकहरुले बाथ ज्वरोको पहिचान गरेपछि त्यसलाई फर्किन नदिनका लागि शरीरमा एक महिनासम्म असर रहिरहने सुईको प्रयोग गर्छन्। जोखिम हेरीकन यो सुई ५ वर्षदेखि १८ वर्ष नपुग्दासम्म र मुटुको समस्या भइसकेको अवस्थामा ३५ वर्षसम्म पनि लगाइरहनुपर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार बाथको प्राथमिक उपचारका लागि घाँटी दुखेको समयमा एकपटक सुई लगाए पुग्छ। तर बाथ ज्वरो लागिसकेपछि द्वितीय रोकथामका लागि प्रत्येक तीन हप्तामा लामो समयसम्म यो सुई लगाई राख्नुपर्छ।
रोगले मुटुको भल्भ साँघुरो पारेमा खुकुलो पार्ने शल्यक्रिया नै आवश्यक पर्छ । र भल्भ बिग्रिएमा शरीरको भल्भ निकाली कृत्रिम भल्भ राख्नुपर्छ। शल्यक्रियापछि पनि रगत पातलो गराउने औषधि खानुपर्छ । औषधिको मात्रा बढी भएमा रगत बढी पातलो भइरहे दाँत माझ्दा र घाउ हुँदा पनि बढी रगत जानसक्छ । बाक्लो भएर थेग्रा जम्मा भएर पक्षघात हुनसक्ने डा. रेग्मी बताउँछन्।
खासगरी चिसो र गुम्सिएको ठाउँमा बस्ने बालबालिकालाई बाथज्वरोले बढी आक्रमण गर्ने भएकाले कक्षाकोठाहरुमा घाम पस्ने र हावा राम्रोसँग खेल्ने किसिमको बनाउन डा.रेग्मीको सुझाव छ। एउटै कोठामा धेरै विद्यार्थी पठनपाठन गराउनाले पनि मुटु रोगको जोखिम बढ्छ।
बाथ ज्वरोको नराम्रो असर मुटु सुन्निने हो। यसले मुटुको बाहिरी, भित्री र मध्यगरी तीनै पत्र सुन्निन्छ। पछि मुटका भल्भहरु बिगिएर साँघुरिने वा चुहिने, मांशपेशी कमजोर भएर मुटुले राम्ररी खुम्चिने र फैलने काम गर्न छोड्न सक्छ।
बिग्रेको भल्भबाट रगत आउन जान गाह्रो भएर मुटु सुन्निने र कामै गर्न नसक्ने भएर जीवनभरका लागि स्वाँस्वाँ आउने, हातगोडा फुल्ने हुन्छ। मुटु सुन्निएका बिरामीलाई मुटु बढी ढुकढुक गर्ने र दम बढ्ने हुन्छ। रोगले जोर्नीलाई चाट्छ र मुटुलाई टोक्छ । जोर्नीहरु बिग्रिदैनन् आफैँ ठीक भएर जान्छन् । तर, मुटुका भल्भ सदाका लागि नष्ट भएर जाने डा. रेग्मीले बताए।
डा. प्रकाशराज रेग्मी